ယင်းမာပင် | “Country roads, take me home, To the place I belong” John Denver 1943-1997
“Country roads, take me home, To the place I belong” John Denver 1943-1997
စစ်ကိုင်းတိုင်း မုံရွာမြို့အနောက်ဖက်ကမ်းက ယင်းမာပင်နယ်ဆိုတာ ကျနော့် မွေးဇာတိပါ။ ဒီနယ်က လက်ပန်တောဆိုတဲ့ ရွာမှာ အသက် ၁၈ နှစ် အထိ နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ယင်းမာပင် အထက ကို ၁၉၉၀ မှာ ၉ တန်းတက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၁ မှာ ၁၀ တန်း ကို မန္တလေး အထက ၁၃ ကို ပြောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ ယင်းမာပင် အထက မှာတုန်းက ဆရာဦးအောင်လှတို့၊ ဆရာမ ဒေါ်အေးမိစံတို့ ကို ကျနော်မေ့မရပါ။
ယင်းမာပင်က သူငယ်ချင်းတွေ များများမရှိပါ။ မြို့ပေါ်ကထက် နယ်က သူငယ်ချင်းများပါတယ်။ ခကွေး ရပ်ကွက်ထဲက အောင်မျိုးထွန်းတို့။ ဇော်ဝမ်းတို့။ ခင်မောင်တင့်တို့။ နောက် ထိန်ဝင်းအောင်တို့ စတဲ့ ကောင်တွေနဲ့ အတွဲများပါတယ်။ (ခုတော့ ဒီကောင်တွေထဲက တချို့လည်း စစ်ထဲရောက်ပြီး ဘာဖြစ်နေပြီလဲ မသိတော။့ အဆက်သွယ်လည်း မရှိတော့ပါ)။ ယင်းမာပင်နယ်သားတွေ အခန့်မသင့်လို့ အင်တာနက်ထဲ ၀င်ခဲ့မိပြီး ကြုံရင် ဆက်သွယ်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ကြီးကြီးငယ်ငယ် ဖြူဖြူမဲမဲပါ။
ယင်းမာပင်မှာ ကျနော့် ငယ်ဆရာရင်းရှိပါတယ်။ ဦးစိုးမြင့်ချိုလို့ခေါ်ပါတယ်။ မောက်သရက်မှာ ကျောင်းနေရင်း ဆရာ့တပြည့်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ၁၉၈၇ က လူရည်ချွန်ဖြေရင်း ဆရာ့အိမ်မှာ ရက်အနည်းငယ် တည်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၁၄ နှစ်သား ၇ တန်းတုန်းကပါ။ နောက်ပိုင်းဆရာက မုံရွာသူနဲ့အိမ်ထောင်ကျပြီး မုံရွာမှာနေပါတယ်။ ဆရာ့ကို မတွေ့တော့တာ အနှစ် ၂၀ နီးပါးရှိပါပြီ။ သတိရ ကျေးဇူးတင်ဆဲပါ။
အခုအမေရိကမှာ နေပေမယ့် အိမ်မက်ရင် ရွာနဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေကို မက်တာများပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ၁၉၉၄ ကနေ ၉၉ အထိ မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ၀တ္တုတိုတွေ ရေးခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့ဓန၊ မဟေသီ၊ ရွှေအမြုတေ၊ ရုပ်ရှင် မဂ္ဂဇင်းတွေမှာ ယင်းမာပင်ပုံရိပ်တွေ ရေးခဲ့ဖူးတာတချို့ကို အမှတ်တရ ပြန်တင်ထားပါတယ်။
ယင်းမာပင် ဘလော့မှာ ရေးလာတဲ့ အမှတ်တရ တုံ့ပြန်စာများ
(၂၀၁၀ ဇန်န၀ါရီ ၂၀ ရက်)
သနပ်ခါး ပါးကွက်ကျားနဲ့ တစ်ဖက်းသားမှာရင်မှာဖို………
ဘုန်းချောင်းနံဘေးမှာ တေးကလေးတွေ သီကာဆို…………
သင်းကြူကြူမွှေး ဖြူပြာညို………… ယင်းမာပင်သူလေး မူယာပို…………
ယင်းမာပင် နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့သီချင်း တစ်ပိုင်းတစ်စ ကလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်………
အပြည့်အစုံကိုတော့ ကျွန်တော်လည်းမေ့နေပြီ……………နောက်ကျရင် ရှာဖွေပြီး
ပို့ပေးလိုက်ပါမယ်…………အဲဒီသီချင်းကလေးကို ၁၉၈၀-၈၁ လောက်က ယင်းမာပင်မြို့ စက်မှုလယ်ယာ မှာလုပ်တဲ့ ကိုခင်မောင်သန်း (ပွင့်ဖြူ) နဲ့ ကိုမြင့်မောင် (ပွင့်ဖြူ) တို့က ရေးသားစပ်ဆိုထားကြပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ မယ်ဒလင်တီးတဲ့ ကိုခင်မောင်သန်း ရဲ့ညီ ကိုမြင့်သိန်း နဲ့ ကိုစိုးနိုင် (ယင်းမာပင်
ခ-ရပ်ကွက်နေ) တို့က ပြန်လည်ပြီး မယ်ဒလင်ဖြင့် တီးခတ် သီဆိုခဲ့ ကြပါတယ်…………
အကြောင်းသင့်ရင်တော့ သူတို့ရဲ့ မယ်ဒလင်သံလေးနဲ့သီချင်း သံလေးကို ကျွန်တော်ကူးယူခဲ့ပြီး
Hello Nay Htut ( KMH ),
Nice to see you and visit our hometown’s page!!!
I’m really proud of it when I received this link via Pa Pa.
My name is Soe Min but the people called as K oPauk in Yin Ma Bin.
Right now, I’m working in Schlumberger Logelco Inc, Yangon.
I know very well about you from Aung Myo Htun as we ever met with him in YGN.
I’m same class with his brother ( Aung Myo Win ).
I was born in Chinbyit Village,Pale Township.I think you will know my village which is under the mount Pone Taung Pone Nyar.I stayed in my village till 20years old and then i moved to yangon with my friends to improve my future life.Now i ‘m trying to survive my life in Singapore.
I am from Pale and also attend class9in 1990 while I was expelled from school. We might be in the same age. Now I am in India. Very glad to know.
Hi Ko KMH,
i just found this siteafew days ago. i am form YMB but now in Singapore. i am very glad and proud of your YMB website. i like your short stories much. are you still writing now? you may not know me but (may be) my father, Saya U than tun.
Today i visit ur site. nice and pretty. Go on
I also publish two site about Yinmarbin town.
pls..visit to my sites.Welcome to u…
Soul Xl@igh Oo
၀တ္တုတို ၅ ပုဒ်
မုံရွာ (သို့) သလ္လာဝတီမြိုတော်
Thi Ha Zin on ယင်းမာပင်မြို့ကလေး
Soe Min ( Ko Pauk ) on ယင်းမာပင်မြို့ကလေး
KMH on ယင်းမာပင်မြို့ကလေး
Myo Myint Maw on ယင်းမာပင်မြို့ကလေး
ကိုမိူးကျော့ on ယင်းမာပင်မြို့ကလေး
Nanda on ယင်းမာပင်မြို့ကလေး
pa pa on ယင်းမာပင်မြို့ကလေး
soul Xl@igh Oo on ယင်းမာပင်မြို့ကလေး